SomaliTalk.com » 2012 » November » 21
Home » Archive Maalinta November 21st, 2012
Xarakada Al-Shabaab oo iska Fogeysey in ay ku lug lahayd Qaraxyadii iyo Dagaaladii ka dhacay Gaarisa iyo Islii .
Afhayeenka Xarakadda Al-Shabaab ee Dhinaca Howlgaladda ayaa iska fogeeyay in Xarakada Shabaab wax Lug ah ay ku lahaayeen Qaraxii ka dhacay Xaafadda Islii iyo Dagaaladii ka dhacay Magaalada Gaarisa ee lala Bar-tilmaameedsaday Dad Shacab ah haddana waxa uu daba dhigay inuusan ka xumeen falkaas lagu waxyeeleeyay dadkaas maadaama buu yiri Kenya ay nagala dhaxayso cadaawad. Shiikh Cabdilcasiis oo hadalkiisa...
Xaaladda Nololeed ee Magaalada Beled weeyne ee Gobolka Hiiraan ayaa iminka si tartiib tartiib ah dib ugu soo laabanaysa ka gadaal Muddo Shan iyo Afartan Cisho kaddib uu Magaaladaas ay qaadeen Biyo ka soo Fatahay Webiga Shabelle . Dadkii Magaalada isaga Barakacay ayaa bilaabay haatan in ay dib ugu soo laabtaan Guryahooda isla markaana ay dib u habeyn ku sameeystaan iyagoo ka saaraya Haraadigii Biyaha...
Barashada Luqadda English | Q.4aad
Qaybtaan waxay si toos ah ugu xiran tahay, qaybihii hore ee aan kasoo hadalnay(http://somalitalk.com/tag/luqad/). Hase yaashee, qaybtaan waxaan xoogga saari doonnaa siddeeda qaybood ee uu ka kooban yahay luuqadda Englishka(The EIGHT PARTS OF SPEECH), siddeedaas qaybood waxaan isku dayi doonnaa mid walba inaan wax ka taabano; Hab isticmaalkooda, wada shaqayntooda iyo sida ay isku racaan, iyo wixii...
Maxamed Yuusuf Xaaji “Shacabka Soomaaliyeed waa in ay is Difaacaan ” Madaxweynaha dawladda Federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo qalabka Warbaahinta ka hadlayay ayaa markii ugu horeeyay ka hadlay Xaaladaha qasan ee ka jira Xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi ee Dalka Kemya.Madaxweynaha ayaa sheegay in ay jiraan Kooxo Fidna wadayaal ah oo doonaya in Magaca iyo Sumcadda ay kaga ciyaaraan...